Guyyaa Kamsaa kana akka himanitti sababa coronavirus magaala Woodbury county keessati dutti akka | KWIT
Akka isiin jetteti 50% qofa business ykn gabaan kan banamu. Akkasumas namni waa bitatuuf dhuufee waliirra faggeenya isaani akka eegatan himte.
Manni fayyaa Iowa Department akka gabaaseti namni 655 haarawni qabamuu fi waliigalati namni coronavirus qabame 11,000 ta’uu himan.
Namni waliigalati coronavirus du’e Iowa keessatti nama 231 gahee jira.
Kampanin Tyson kan Dakota city Nebraska keessatti argamu sababa hojatooni coronavirus qabamu erga cufee booda guyyaa har’a baname jira.
Tyson guyyaa Jimaata erga cufee booda guyyaa afur booda bannuu yaade turee, garuu sababa deebi qorannoo dalaydootta issa eeguf banuura duubatti deebi’an.
Kampamichi hojattoota nama 4,300 qaba.
Magaala Sioux City bottadhan bay’een akkuma cufeti jira. Garuu ammalee bulding nannoo adda adda fi paarkidhan sa’atti murtaawaa qofa akka banamu himan. Bulchitooni naanawa May 15 akka irra deebi’ani lalaan himame.
Yeroo dheeratif komminity keessa kan hojatu kan ummata immigrant qarqaara turte du’aan boqattee jirti.
Hang.Cuc Thi Nguyen (hun-cook tea wynn) itti gafatamttu community Vietnamese turte.
Namni Hang-Cuc kalaahu tokko akka jedhetti waggaa kana keessa hir’ina fayyaa akka qaban hime. Akkasumas qarqaaran isii akka KMEG TV himeti torbaan tarte jalqaba irratti dhukubsachuu akka jalqabdee fi guyyaa Harba sa’aati booda akka duute hime. Dhukuba coronavirus qabamte turte.
Nguyen, dhalatu Vietnam yoo taatu, Bara 1981 kan US dhufteedha. Dalagaa isiitifis kabajaa guddaa itti argate.
Nguyen nama waggaa 87 turan.